हरेक मानिसको जीवनसँग मेल खाने चलचित्र ‘लभ लभ लभ’को शक्ति भनेकै यही हो– निर्देशक दीपेन्द्र - Ratopati
हरेक मानिसको जीवनसँग मेल खाने चलचित्र ‘लभ लभ लभ’को शक्ति भनेकै यही हो– निर्देशक दीपेन्द्र
हरेक चलचित्र फरक विषयमा बनाउने निर्देशक हुन्– दिपेन्द्र के खनाल । प्रयोगवादी निर्देशकका रुपमा पनि उनलाई लिन सकिन्छ । ‘चपली हाइट’, ‘थ्री डी भिजिलान्ते’, ‘पशुपति प्रसाद’लगायत चलचित्रले पनि सो देखाएको छ । ‘दी युगदेखि युगसम्म’ चलचित्रबाट निर्देशनमा डेब्यु गरेका खनालको करिब दर्जन हाराहारीका चलचित्र बजारमा आएका छन् । ती सबै चलचित्रले एक से एक चर्चा बटुलेका छन् । चलचित्र निर्देशनबाट प्रसंशा, चर्चा र अवार्ड थुप्रै पाएका निर्देशक खनालको अर्काे चलचित्र ‘लभ लभ लभ’ वैशाख १ गतेबाट रिलिज हुँदैछ । यो चलचित्रमा प्रेमकथा उनले विषयका रुपमा उठाएका छन् । थुप्रै विषय चलचित्रमा प्रयोग गरेर सफलता हात पारेका खलाल प्रेमकथाबाट पनि सफलता मिल्ने बताउँछन् । सानो क्यानभासमा ठूलो चलचित्र बनाउन माहिर निर्देशक दीपेन्द्र के खनालले ‘लभ लभ लभ’ स्वस्तिामा खड्का र सुरजलाई लिएर बनाएका हुन् । उनै निर्देशक दीपेन्द्रसँग चलचित्रको विषयमा रातोपाटीले राखेको केही प्रश्न :
तपाईंको निर्देशन रहेको चलचित्र ‘लभ लभ लभ’ प्रदर्शनमा आउँदैछ । यो कस्तो चलचित्र हो ?
नामले नै यो चलचित्र प्रेमकथामा आधारित रहेको छ भन्ने बुझाउँछ । प्रेमकथा अर्थात् मायाका कुरा । यीबाहेक चलचित्रमा अन्य केही भेटिँदैनन् । सिम्पल प्रेमकथामा सानोसानो कुरा उठाएर राम्रो बनाएको छु ‘लभ लभ लभ’ मैले । चलचित्रभित्रका रहेका पत्रहरुले धेरै स्ट्रगल पनि गर्दैनन् । यसको विषयवस्तु हरेक मानिसको जीवनमा मेल खान्छ । चलचित्र ‘लभ लभ लभ’को शक्ति भनेकै यही हो । दर्शकले चलचित्रभित्र आफूलाई नै पाउने छन् । मेरो प्रयास पनि यही हो ।
तपाईंको चलचित्रप्रति दर्शकले ठूलो अपेक्षा राख्छन् । ‘लभ लभ लभ’ले यो पूरा गर्ला त ?
म त ढुक्क छु । ठोकुवा पनि गर्नसक्छु । हरेक मानिसले चलचित्रलाई आफ्नो प्रेमकथा भन्न सक्नेछन् । कतिपय अवस्थामा मन पराएको मायालु पाइँदैन, छुटेको मायालु कहिलेकाहीँ याद आउँछ, मन पराएको मानिससँग सम्बन्ध बिग्रन खोज्ने अवस्था आउँछ । यी र यस्तै अवस्था भएका आमदर्शकले ‘लभ लभ लभ’ हेर्दा हुन्छ । यसले सबैको अपेक्षा पूरा गर्छ । चलचित्रले सबै प्रकारका दर्शकलाई रिफ्रेस गराउँछ ।
प्रयोगवादी निर्देशक तपाईं । यो चलचित्रमा के प्रयोग गर्नुभएको छ त ?
चलचित्र नै पूरै प्रयोग हो । यसमा चिनिएको नाम भनेको म मात्रै एक जना । आममानिसको प्रेमकथा लिएर आएको छु यसपटक । टोल छिमेकको, आफूले देखेको, भोगेको प्रेमकथा हुनसक्न चलचित्रमा मैले उठाएको विषय । चलचित्र फ्रेस छ । कथा भन्ने शैली सबैभन्दा उत्कृष्ट छ । दर्शकले पर्दामा चलचित्र हेरुन्जेल पहिलो चोटि यस्तो कथामा चलचित्र हेरेको महशुस गर्नेछन् । सबैलाई राम्रो लाग्नेछ ।
प्रेमकथामा किन उत्रिनु भयो ?
मैले अरु धेरै जनरा चलचित्र बनाइसकेँ । पूर्ण प्रेमकथामा मेरो यो पहिलो प्रयास हो । माया प्रेमसँग सबै नजिक भएकै हुन्छन् । त्यसैले माया पिरतिमा चलचित्र बनाउने सोच त मेरो पहिलै थियो । तर बजारमा आएका चलचित्रका जस्तो प्रेमकथामा बनाउदिन भन्ने ममा थियो । मायाका जति पनि पाटा हुन्छन् तीमध्ये फरक पाटा समाएर बनाउछु भन्ने मेरो अठोट हो । अहिले बजारमा आएका चलचित्रको मायाका पाटा उस्तै लाग्ने खालका छन् । यसमा ठूला सङ्घर्ष भरिएको, भिलेन भएका छन् । यस्ता चलचित्र बनाउँदिन । बरु मायाकै अनसिन पाटो जसलाई मानिसले याद नगरेको विषयमा चलचित्र बनाउँछु भन्ने मेरो सोच थियो । यो सोच लभ लभ लभमा पूरा गरेको छु ।
नयाँ कलाकार लिएर चलचित्र बनाउनु हुन्छ, काम गराउन सजिलो भएर हो कि अन्य केही कारण छन् ?
एक कारण यो पनि हो । नयाँ कलाकारलाई आफूले भनेजस्तो पात्र बनाउन पनि पाइयो । अर्काे कुरा फ्रेस स्टोरीमा नयाँ पात्र घुसाउँदा दर्शकको पात्रप्रति विश्वास पनि धेरै हुन्छ । पुरानो धेरै चलचित्रमा देखिरहेको अनुहारको नयाँ चलचित्र हेर्दा दर्शकलाई ती पात्रको केही पहिलेको अभिनय हाबी दर्शकले महशुस गर्छन् । त्यसैले नयाँ लिँदा पात्रलाई दर्शकले विश्वास गर्न सक्ने बनाउन सजिलो हुन्छ । दर्शकलाई पनि रमाइलो लाग्छ । त्यसैले सकेसम्म चलचित्रमा म नयाँ पात्र भित्राउने गदर्छु ।
यस पटक तपाईंको प्रतिस्पर्धा अन्य दुई प्रतीक्षित चलचित्रसँग हुँदैछ । कतिको च्यालेन्ज महसुस भएको छ ?
मलाई जहिले जे गर्दा पनि च्यालेन्ज महसुस छ । चाहे चलचित्र कसैसँग जुधोस् या नजुधोस् । म जहिले पनि नयाँ जसरी आउन चाहन्छु । आफ्नो चलचित्र चलोस् भन्ने सोच सबैलाई हुन्छ । मेरो चलचित्र दर्शकलाई कतिको मनपर्छ भन्ने कुरो हो । आफ्नो काममा ढुक्क छु ।